Amava: Sibubonile Ububele Obungasifanelanga BukaThixo | UDouglas Guest
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla yaseOstreliya Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMingrelian IsiMongolia IsiMoore IsiMotu IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTongan IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrhobo IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiKurdish Kurmanji isiZapotec (saseIsthmus)
Kubalisa uDouglas Guest
UTATA, uArthur, ukhule engumntu ohamba icawa, ibe wayefuna ukuba ngumfundisi waseWisile xa emdala. Kodwa, waphela loo mnqweno xa wafunda iincwadi zaBafundi BeBhayibhile waza waqalisa ukuya kwiintlanganiso zabo. Wabhaptizwa ngo-1914 eneminyaka eyi-17. IMfazwe Yehlabathi I yayisiya iqinisa, ibe wabizwa ukuba aye emkhosini. Kuba wayengafuni ukusebenzisa izixhobo, wagwetywa iinyanga ezilishumi entolongweni, eKingston Penitentiary eOntario, eKhanada. Emva kokuba ekhululwe waba kwinkonzo yexesha elizeleyo, eyicolporteur (uvulindlela).
Ngo-1926, uArthur Guest watshata noHazel Wilkinson, ibe umama kaHazel wayefumene inyaniso ngo-1908. Ndazalwa nge-24 ka-Aprili, 1931, ndingumntwana wesibini kwabane. Eyona nto eyayibalulekile kwintsapho yethu yayikukunqula uYehova kwaye utata wayeyihlonipha kakhulu iBhayibhile, ibe loo nto yenza sahlala silixabisa iLizwi LikaThixo. Intsapho yasekhaya yonke yayisoloko isentsimini.​—IZe. 20:20.
UKUNGATHATHI CALA NOKUBA NGUVULINDLELA NJENGOTATA
Kwaqalisa iMfazwe Yehlabathi II ngo-1939, ibe kunyaka olandelayo wavalwa umsebenzi wokushumayela wamaNgqina KaYehova eKhanada. Izikolo zikarhulumente zaziba nemibhiyozo yokuthanda ilizwe njengokukhahlela iflegi nokucula umhobe wesizwe. Mna nodade wethu omdala kum, uDorothy, sasigxothwa kwiiklasi zethu xa kusenziwa le mibhiyozo. Ndingalindelanga, ngenye imini utitshala wam wahlekisa ngam esithi ndiligwala. Ukuphuma kwesikolo, abafundi abaliqela bandithuka baza bandibetha ndaya kulala ngophotho. Kodwa ukuhlaselwa kwam kwandenza ndazimisela ngakumbi ukuba ndithobele “uThixo njengomlawuli kunabantu.”​—IZe. 5:29.
NgoJulayi 1942, ndabhaptizwa etankini kwenye ifama, ndineminyaka eyi-11. Ndandithanda ukuba nguvulindlela wexesha lekhefu (ngoku obizwa ngokuba nguvulindlela ongumncedani) xa kuvalwe izikolo. Ngomnye unyaka ndahamba nabanye abazalwana abathathu ababeshumayela kubantu abagawula imithi ababehlala kwintsimi engabelwanga bani kumantla eOntario.
Ngomhla woku-1 kaMeyi, 1949 ndaba nguvulindlela othe ngxi. Isebe lalisakha, ngoko ndamenywa ukuba ndincedise kulo msebenzi, kwaye ngomhla woku-⁠1 kaDisemba ndaba lilungu lentsapho yeBheteli yaseKhanada. Ndandisebenza kwisebe lokuprinta yaye ndafunda ukusebenzisa umatshini wokuprinta. Kangangeeveki eziliqela ndandisebenza ebusuku, siprinta iphecana elalithetha ngokutshutshiswa kwabantu bakaYehova eKhanada.
Kamva, xa ndandisebenza kwiSebe Lenkonzo, ndadlan’ iindlebe noovulindlela ababetyelele iofisi yesebe besendleleni eya eQuebec, idolophu ekwakuchaswa kakhulu kuyo. Omnye wabo yayinguMary Zazula wase-Edmonton, eAlberta. Yena kunye nomntakwabo omdala kunaye, uJoe, bagxothwa kowabo ngabazali babo abangamaOthodoki azimiseleyo ngenxa yokuba bengazange bavume ukuyeka ukufunda iBhayibhile. Bobabini babhaptizwa ngoJuni 1951, ibe kwiinyanga ezintandathu emva koko baba ngoovulindlela. Njengoko sasiqhubeka nodliwano-ndlebe ndayithanda indlela uMary abuxabise ngayo ubuhlobo bakhe noYehova. Ndazixelela ukuba, ‘Le intombi ndiza kuyitshata, ngaphandle kokuba kukho into evelayo.’ Satshata emva kweenyanga ezisithoba, nge-30 kaJanuwari, 1954. Kwiveki emva koko, saqeqeshelwa ukwenza umsebenzi wesiphaluka, ibe sakhonza kangangeminyaka emibini kwisiphaluka esikumantla eOntario.
Njengoko umsebenzi wokushumayela wawusanda ehlabathini lonke, kwahlatyw’ ikhwelo elithi kufuneka abathunywa bevangeli. Saqonda ukuba, ukuba siyakwazi ukunyamezela ingqele eqhaqhazelis’ amazinyo yaseKhanada ebusika kunye neengcongconi ezihluphayo ehlotyeni, ngoko sinako ukunyamezela iimeko ezimbi ezisenokubakho kuso nasiphi na isabelo sethu. NgoJulayi 1956 saphumelela kwiklasi ye-27 yeSikolo SaseGiliyadi, yaye kwathi kusiba nguNovemba sabe sikwisabelo sethu eBrazil.
UKUBA NGUMTHUNYWA WEVANGELI EBRAZIL
Xa safika kwisebe laseBrazil, safundiswa isiPhuthukezi. Emva kokufunda indlela yokuzazisa nokunkqaya intshumayelo yomzuzu yokuhambisa imagazini kwathiwa singaqalisa ukuya entsimini. Sacetyiswa ukuba xa umninimzi enomdla simfundele izibhalo ezithetha ngendlela ekuya kuba yiyo xa kulawula uBukumkani BukaThixo. Mhla siqala ukuya entsimini, elinye inenekazi laba nomdla, nam ke ndalifundela iSityhilelo 21:3, 4​—emva koko, ndathi qikili, ndafeyinta! Umzimba wam wawungekaliqheli ilanga eligqats’ ubhobhoyi ngolo hlobo, ibe loo nto yaba yingxaki eqhubekayo.
Sabelwa ukuba sibe ngabathunywa bevangeli kwisixeko saseCampos, ngoku apho kukho amabandla ayi-15. Xa sasifika apho kwakukho iqela elilodwa kweso sixeko kunye nekhaya labathunywa bevangeli ekwakuhlala oodade abane kulo: UEsther Tracy, uRamona Bauer, uLuiza Schwarz, noLorraine Brookes (ngoku nguWallen). Kwelo khaya ndandabelwe ukuhlamba impahla nokutheza. Ngenye ingokuhlwa yangoMvulo emva kweSifundo SeMboniselo safikelwa lundwendwe esasingalulindelanga. Umkam wayengqengqe esofeni, sizincokolela kamnandi ngokuba belunjani usuku lwethu. Xa ephakama, kwaphuma inyoka ngaphantsi komqamelo, ibe yaba nguphantsi phezulu de ndayibulala!
Emva konyaka ndifunda isiPhuthukezi ndamiselwa ndangumveleli wesiphaluka. Sasiphila ubomi basezilalini obuphantsi​—saqhela ukuphila ngaphandle kombane, ukulala emethini, nokukhwela ihashe nenqwelo yamahashe. Xa sikwiphulo lokushumayela kumhlaba ongabelwanga bani, sasihamba ngetreyini sisiya kwidolophu esezintabeni size siqeshe igumbi apho. Iofisi yesebe yayisithumelela iimagazini eziyi-800 ukuze sishumayele ngazo. Kwakufuneka simane sisiya eposini siyolanda iibhokisi zeemagazini, size sizise apho sihlala khona.
Ngo-1962 kwabakho iSikolo Sobulungiseleli SoBukumkani sabazalwana kunye noodade abangabathunywa bevangeli kulo lonke elaseBrazil. Kangangeenyanga ezintandathu ndandiziqhuba zonke ezo zikolo, ndisuka kwesinye ndiye kwesilandelayo, kodwa ndandingahambi noMary. Ndaqhuba iiklasi eManaus, eBelém, eFortaleza, eRecife, naseSalvador. Ndalungiselela ukuba kubekho indibano yesithili kwiholo yeopera yodumo yaseManaus. Izantyalantyala zemvula zenza amanzi angcoliseka kwaba yingozi ukuwasela saza asabi nandawo yokutyela efanelekileyo yendibano. (Ngaloo maxesha, kwakuphekwa ezindibanweni.) Ndathetha namajoni, ibe igosa elasihoyayo lalinobubele laza lasilungiselela ukuba sifumane amanzi okusela de iphele indibano laza lathumela amajoni awagxumeka iintente ezimbini ezinkulu, enye yaba likhitshi yaza enye yaba yindawo yokutyela.
Ngoxa ndandingekho ndisaqhuba ezo klasi, uMary wayeshumayela kwindawo yabarhwebi abangamaPhuthukezi, apho abantu babenomdla wokuthetha ngemali qha. Ngoko, kwakunzima ukuba ade afumane umntu wokuncokola naye ngeBhayibhile, wathi kwamanye amalungu aseBheteli, “Andifuni ukuya kuhlala ePortugal apha ebomini bam.” Soz’ ukholelwe! Kungentsuku zatywala, safumana ileta ethi masiye kukhonza ePortugal. Ngelo xesha, umsebenzi wokushumayela wawuvaliwe apho, kodwa ke savuma ukuya khona nangona uMary wayengasilindelanga eso sabelo.
ISABELO SETHU EPORTUGAL
Safika eLisbon, ePortugal, ngoAgasti 1964. Abazalwana babetshutshiswa ngokukrakra ngamapolisa alapho. Ngenxa yoko, kwagqitywa ekubeni abazalwana bangasihlangabezi yaye singadibani namaNgqina alapho. Sahlala kwikhaya elamkela iindwendwe ngoxa sasisalinde ukufumana imvume yokuhlala kwelo lizwe. Emva kokuba siyifumene imvume, saqesha indawo yokuhlala. NgoJanuwari 1965, sade sanxibelelana neofisi yesebe. Savuya kakhulu xa sakwazi ukuya ezintlanganisweni okokuqala emva kweenyanga ezintlanu!
Amapolisa ayegqogqa amakhaya abazalwana umhla nezolo. Ekubeni iiHolo ZoBukumkani zazivaliwe, iintlanganiso zazingenela emakhayeni. AmaNgqina amaninzi ayesiwa kwizikhululo zamapolisa ukuze kuhlolwe iincwadi zawo zezazisi aze ancinwe. Abazalwana babephathwa kakubi kuzanywa ukuba bade bakhuphe amagama abantu abaqhuba iintlanganiso. Ngenxa yoko, abazalwana babebizana ngamagama anjengoJosé okanye uPaulo, kungekhona ngeefani. Nathi sabizana ngaloo ndlela.
Eyona nto sasifuna ukuyenza, kukuqinisekisa ukuba abazalwana bayazifumana iincwadi ezithetha ngeBhayibhile. UMary wayekhuphela amanqaku afundwayo eMboniselo nezinye iincwadi ukuze bazifumane.
UKUTHETHELELA IINDABA EZILUNGILEYO EZINKUNDLENI
NgoJuni 1966 abazalwana bamangalelwa eLisbon. Onke amalungu ebandla laseFeijó ayi-49, aya kuxoxa ityala awayebekwe lona lokuba neentlanganiso ezingekho mthethweni kwikhaya lomzalwana. Ndabanceda abo bazalwana balungiselela elo tyala, ngokuthi ndibabuze imibuzo ngokungathi ndingumtshutshisi. Sasisazi ukuba asizuliphumelela elo tyala, kodwa ke sasinokukwazi ukushumayela. Igqwetha lethu kumazwi alo okugqibela okusithethelela, ngesibindi lathetha ngoGamaliyeli wenkulungwane yokuqala. (IZe. 5:33-39) Elo tyala laba kumaphephandaba, ibe abo bazalwana noodade bayi-49 bavalelwa ixesha eliphakathi kweentsuku eziyi-45 neenyanga ezintlanu ezinesiqingatha. Igqwetha elalisimele lavuma ukuqhutyelwa isifundo seBhayibhile, ibe lalisiya ezintlanganisweni ngaphambi kokusweleka kwalo.
NgoDisemba 1966 ndaba ngumveleli wesebe kwaye ndandijongene nezinto zomthetho. Salilwela ilungelo lamaNgqina KaYehova lokunqula ngokukhululekileyo. (Fil. 1:7) Ekugqibeleni, nge-18 kaDisemba, 1974, samkelwa ngokusemthethweni. UMzalwan’ uNathan Knorr noFrederick Franz abavela kwikomkhulu lehlabathi, batyelela ePortugal beze kwindibano eyimbalasane eOporto naseLisbon, eyayinabantu abayi-46 870 xa bebonke.
UYehova wabangela ukuba kubekho ulwando kwiziqithi ekwakuthethwa isiPhuthukezi kuzo, eziquka iAzores, iCape Verde, iMadeira, neSão Tomé and Príncipe. Ngo-1988, sade saba nesakhiwo esikhulu sesebe ekwakudala sisifuna. Nge-23 ka-Aprili wangaloo nyaka, uMzalwan’ uMilton Henschel wanikezela eso sakhiwo sitsha phambi kwabantu ababenemincili abayi-45 522. Savuya xa abazalwana noodade abayi-20 ababengabathunywa bevangeli ePortugal beza kwesi siganeko siyimbalasane.
SIFUNDE LUKHULU KWIMIZEKELO YOKUTHEMBEKA
Kuyo yonke le minyaka, ubuhlobo bethu nabazalwana abathembekileyo bubenze baphucuka ubomi bethu. Ndafunda lukhulu xa ndandihamba noMzalwan’ uTheodore Jaracz sityelele elinye isebe. Elo sebe lalinengxaki enkulu, ibe amalungu eKomiti Yesebe ayenze konke ayenokukwenza. Ewahlis’ umoya uMzalwan’ uJaracz wathi: “Ngoku, makhe sivumele umoya oyingcwele usebenze.” Kumashumi eminyaka edluleyo, mna nomkam, uMary, satyelela eBrooklyn, ibe ngenye ingokuhlwa sahlala noMzalwan’ uFranz kunye nabanye abazalwana. Xa wacelwa ukuba atsho amazwi okugqibela ngalo ngokuhlwa, uMzalwan’ uFranz wathi: “Ndicebisa ngelithi: Hlala kwintlangano kaYehova nokuba sekumnyam’ entla. Yiyo yodwa eyenza umsebenzi uYesu awawuthuma abafundi bakhe, ukushumayela iindaba ezilungileyo zoBukumkani BukaThixo!”
Mna nomkam, umsebenzi wokushumayela usenze sonwaba kakhulu. Asisoze sizilibale iintsuku esasityelela ngazo amasebe. Zasivulela amathuba okubabulela abatsha nabakhulileyo abamkhonza ngokuthembeka uThixo nelokubakhuthaza ukuba baqhubeke bemkhonza uYehova ngaloo ndlela ikhethekileyo.
Iminyaka ibalekile, ngoku sobabini sesidlulile kwiminyaka eyi-80. UMary uhlutshwa kakhulu yimpilo. (2 Kor. 12:9) Iimvavanyo ziluqinisile ukholo lwethu kwaye zisenze sazimisela ngakumbi ukukhonza uYehova. Xa sicinga ngobomi bethu, siyavuma ukuba, sibubone ngeendlela ezininzi ububele obungasifanelanga bukaYehova. *
^ isiqe. 29 Xa bekubhalwa eli nqaku, uMzalwan’ uDouglas Guest uye wasweleka ethembekile kuYehova nge-25 kaOktobha, 2015.
Inkonzo Yexesha Elizeleyo—Apho Iye Yandikhokelela Khona